Amin'ireo rindranasa dimy ireo dia azonao atao ny manararaotra ny Chromecast | Androidsis
Vita izany azo vidiana Chromecast ao amin'ny Play Store, ka ao anatin'ny roa andro, ny fotoana hahatongavan'ny dongle vao novidinao, afaka milalao karazana atiny multimedia rehetra ianao Amin'ny alàlan'ny efijery fahitalavitra miaraka amin'ny finday avo lenta na tablette Android anao.
Mitondra anao izahay fampiharana manan-danja dimy hanararaotana feno ireo fiasa izay atolotry ny Chromecast, satria manana an'ity vokatra Google vaovao ity ianao dia azonao atao ny manadino ny mampifandray ny solosainao finday amin'ny fahitalavitra hijerena horonantsary na andian-tantara tianao na ilay horonan-tsary YouTube tianao hampisehoana ny namanao.
4 Cloud RealPlayer
5 Media an'ny LocalCast 2 Chromecast
Io no fampiharana Google ofisialy ho an'ny dongle izay mifandray amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny HDMI. Azonao atao ny manefy ny Chromecast anao hiara-miasa amin'ny tamba-jotra Wi-Fi eo an-toerana avy ao an-tranonao na tantano ny safidin'ny fikirakirana Chromecast toy ny fanovana ny anaran'ny fitaovana, ny teny miafin'ny tambajotra na maro hafa.
Raha vantany vao apetrakao sy ampiarahinao io dia azonao atao midira atiny avy amin'ny Google Play, YouTube na Chrome. Fampiharana tena ilaina rehefa efa manana Chromecast eny an-tananao ianao hampifandray azy amin'ny fahitalavitra.
AllCast no rindrambaiko voalohany natomboka tamin'ny fotoana nisehoan'ny Chromecast tany Etazonia. Miaraka amin'ny ampahany amin'ny resabe, ny mpamorona azy Koush, iray amin'ireo mpamorona fampiharana lehibe indrindra ho an'ny Android, dia nahavita nanangana rindranasa iray izay manana lisitry ny endri-javatra manan-danja ary io dia iray amin'ireo ilaina indrindra amin'ny Chromecast.
Miaraka amin'ny AllCast dia afaka mandefa sary, mozika ary horonan-tsary avy amin'ny Android amin'ny TV ianao ary manolotra fanohanana feno an'ny Chromecast hatramin'ny fanavaozana farany azy. Ny kinova maimaimpoana dia manana fetra 1 minitra hijerena sary sy horonan-tsary, noho izany zava-dehibe ny mividy ny kinova premium hanala an'io fetra io.
Ianao dia afaka stream avy amin'ny Dropbox / Drive, zahao ny satan'ny tamba-jotra, karohy ireo fitaovana amin'ny tamba-jotra eo an-toerana, tazomy ny fitaovana mandritra ny streaming na milalao atiny avy amin'ny karatra SD ho zava-dehibe.
DayFrame dia rindranasa iray izay miasa lehibe indrindra dia ny mamadika ny smartphone-nao na ny takelakao ho sary iray mandritra ny androm-piainany. Ary raha ampidirintsika ao amin'ny Chromecast izy io dia afaka mampiasa ny efijery fahitalavitra hahitantsika ny sary rehetra tadiavinay avy amin'ny serivisy toa an'i Instragram, Flickr na 500px, na koa avy amin'ny fahatsiarovana anatiny ny fitaovantsika Android.
Ianao dia afaka mampifandray DayFrame amin'ny fahitalavitrao amin'ny alàlan'ny Chromecast, ary avelao hamerina hamoaka ny sary rehetra avy amin'ny serivisy toa ny Facebook, Instragram, Tumblr, Google+, Dropbox, Flickr, Twitter, 500px ary maro hafa.
Amin'ny fanavaozana farany manolora safidy fampisehoana slide maimaim-poana ho an'ny Chromecast, noho izany dia amin'ny fotoana mety indrindra hametrahanaana ity rindranasa ity ianao.
Ny RealPlayer Cloud dia mamela mampakatra horonan-tsary ao amin'ny rahona mba hahafahanao milalao azy ireo amin'ny fitaovana Android anao amin'ny alàlan'ny Chromecast. Ny serivisy dia manolotra habaka malalaka 2GB handefasana betsaka araka izay tadiavinao.
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia ny manampy ny horonan-tsarinao amin'ny rahonao na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona, mba ho avy eo RealPlayer dia manitsy azy ireo ho azy ny haben'ny efijery, ny fantsom-pifandraisana ary ny karazana fitaovana.
Fampiharana mahaliana iray hafa izay tsy azonao adino hanararaotra tanteraka ny Chromecast, ankoatry ny zava-misy fa manana ny fankatoavana ho ekipa fampandrosoana mitovy amin'ilay mpilalao RealPlayer malaza izy.
RealTimes (miaraka amin'ny RealPlayer)
Media an'ny LocalCast 2 Chromecast
Amin'ny LocalCast azonao atao ny manampy dikanteny, rotate sary sy sarimihetsika, ary zahao izy ireo. Ny mampiavaka azy hafa dia ny ahafahana mandefa sary, horonan-tsary na mozika avy amin'ilay fitaovana, na koa avy amin'ny browser.
Safidy iray hafa raha tsy mandresy lahatra anao ny AllCast ary mitady fampiharana maimaimpoana ianaoNa dia hahita doka ao anatiny aza ianao, izay azo esorina amin'ny fividianana ny kinova premium.
LocalCast: mivantana amin'ny fahitalavitra
Aza adino fa ankoatr'ireo rindranasa dimy ho an'ny Chromecast ireo dia manana YouTube, Chrome ianao na Google Play hilalao atiny multimedia amin'ny efijery fahitalavitrao maimaim-poana.
Amin'ny maha tendro farany azy dia mety hahaliana ihany koa izy io ny fomba famadihana na famadihana horonan-tsary.
Fanazavana fanampiny - Ny Chromecast dia misy ankehitriny any Espana sy firenena 10 hafa amin'ny € 35
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Chromecast
Ny Chromecast dia misy ankehitriny any Espana sy firenena 10 hafa amin'ny € 35